LastPass Password ကို Manager ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » LastPass Password ကို Manager က
LastPass Password ကို Manager က APK ကို
LastPass လုံခြုံတဲ့ Vault ၌သင်တို့၏စကားဝှက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသော့ခတ်မယ့် password ကိုမန်နေဂျာနဲ့ password မီးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ LastPass Vault ကနေ, သင်, စကားဝှက်နဲ့ login သိုလှောင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ် profile များကိုဖန်တီးကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့စကားဝှက် generate, မှတ်စုထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံများနှင့်ထို့ထက် ပို. နိုင်ပါတယ်။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်သင့်ရဲ့ LastPass မာစတာစကားဝှက်ကိုမှတ်မိနေနှင့် LastPass သင်တို့အဘို့ကို web browser နဲ့ App ကို login autofill လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်တန့်သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းအကောင့်ထဲကသော့ခတ်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာစကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့။ LastPass သင်တို့အဘို့သင့်စကားဝှက်ကိုမှတ်မိကြကုန်အံ့, သင်ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းစောင့်ရှောက်လော့။
LastPass ယခု Download များနှင့်သင့်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်လိုအပ်သည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရပါတယ်။ သငျသညျအခမဲ့အဘို့, ဖုန်းများ, တက်ဘလက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများအပါအဝင်သင်၏ကိရိယာများအားလုံးဖြတ်ပြီး LastPass ကိုသုံးနိုင်သည်။
- လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့ LastPass အတွက်သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်အားလုံးအတှကျ Store မှာ username နဲ့ password Vault encrypted ။
- သင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site နဲ့ app သွားရောက်လည်ပတ်အဖြစ်အန်းဒရွိုက် Oreo နှင့်အနာဂတ် OS ကိုလွှတ်ပေးဘို့, LastPass ကိုအလိုအလျောက် Vault မှ username နဲ့ password ကို save ပါလိမ့်မယ်။
- သင်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် app များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုတဖန်သူတို့ကိုသတိရဖို့လိုဘယ်တော့မှဒါ Passwords များကိုအလိုအလျှောက်, သင်တို့အဘို့အတွက်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သာသင့်ရဲ့ LastPass မာစတာစကားဝှက်ကိုမှတ်မိခြင်းနှင့်အရာကြွင်းလေကိုမေ့လျော့။
- အခမဲ့ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်အတူသင်တဦးတည်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် save ဘာမှအားလုံးအခြားထုတ်ကုန်များပေါ်မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။
- လုံလုံခြုံခြုံ encrypted Vault အတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံကတ်များကဲ့သို့အအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထား။
- LastPass အတွက်အရာအားလုံးဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, လုံခြုံ access ကိုအဘို့သင့်လက်ဗွေရာနှင့်အတူအတွက် Log ။
- Safely နှင့်အဆင်ပြေထိုကဲ့သို့သော cable ကိုရဲ့ login သို့မဟုတ် Wi-Fi password ကိုအဖြစ်အခြားသူများနှင့်အတူ passwords များကိုမျှဝေပါ။
- built-in password ကိုမီးစက်နှင့်အတူတဦးတည်းကလစ်အတွက်လုံခြုံတဲ့စကားဝှက်ကိုဖန်တီးပါ။
- Multi-factor authentication သင့်အကောင့်အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဒုတိယအလွှာကိုထည့်သွင်းဖို့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို Vault လုံလုံခြုံခြုံ။
သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုသင်ရရှိနိုင်, သာသင်တို့သည်ဤမျှ LastPass, စာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာဖို့အဓိကသော့ချက်ရှိပါတယ်ဘူး။ သင့်ရဲ့ Vault ဘဏ်-Level, AES 256-bit encryption နဲ့ encrypt ဖြစ်ပါတယ်။
- စကားဝှက်ပစ္စည်းများနှင့်မှတ်စုများ၏ Unlimited ခွဲဝေမှု
- 1GB encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်သိုလှောင်မှု
- YubiKey နဲ့တူပရီမီယံ Multi-factor authentication
- Desktop ကိုလက်ဗွေစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း
သင့်ရဲ့စကားဝှက်တွေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, လုံခြုံ access ကိုယနေ့ LastPass ကို Download လုပ်!
သင့်ရဲ့ LastPass အကောင့်သို့အတွက် logging သည့်အခါ LastPass လှစ်ထား app ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-Level, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကသုံးစွဲဖို့ကထို option ကဆက်ပြောသည်။ အသစ်ကလှစ်ထားရာပူဇော်သက္ကာဘို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, LastPass.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
13.92 ကို MB
လုံခြုံရေး - …